Ogaden News Agency (ONA) – Daacuun calooleed ka dilaacay Ogadenya
Daacuun calooleed ka dilaacay Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ October 2, 2011
War-saxaafadeed – October 2, 2011
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa warsaxaafadeed ka soo saartey daacuunka ka dilaacay gobolka Qoraxay ee dawladda gumaysiga Ogadenya ay caalamka ka qarinayso. Warsaxaafadeedka ayay jabhadda ku sheegtay in;
Todobaadyadii la soo dhaafay uu ka dilaacay daacuun calooleed gobolka Qorahay ee magaala madaxda u tahay Qabri-dahare. Masuuliyiinta caafimaadka u qaabilsan JWXO ee jooga gobolka ayaa ku soo waramay inay dadka u dhintay cudurkaa ilaa hadda uu gaadhayo 50meeyo. Qiyaasta dadka uu cudurka hayo ee la ildarana uu kor u dhaafay kun qof iyadoo ay xaaladu ka sii dareyso. Adeegyada caafimaadka gobolka oon qalabaysneyn iyo maamulka oo aad u liita ayaan ku filnayn inay la falgalaan dhibaatadan.
Xukuumadda Itobiya ayaa si ku-talagal ah uga qarinaysa beesha caalamka cudurkan. Waxayna ka qarinta beesha caalamka cudurkan ka dilaacay gobolka qayb ka tahay siyaasadda cunaqabatynta dhaqaale ee dalkoo idil saaran.
Hadda oo xilli roobaadkii uu bilowday, waxaa aad looga cabsi qabaa inuu sii faafi doono daacuunka. Dadka cudurka uu ku dhacay ayaan la ogayn xaaladooda maadaama aan saxaafdda caalamka loo ogolayn inay tagaan gobolka oo haya’adahii samafalada iyo QM-na la afqabtay.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) ayaa beesha caalamka ka codsatay in gargaar dagdag ah lala soo gaadho dadka uu daacuunka ku dhacay, isla markaana lagu qasbo maamulka Itobiya in la gaarsiiyo daryeel caafimaad dadka shacabka. Waxay si gaar ah JWXO ugu codsataya hay’adda caafimaadka caalamka ee WHO (World Health Organisation) inay go’aan dhaxalgal ah ka qaadaan arintan oy si dhaqsa leh ugu diraan gobolka dhakhaatiir iyo daawo.
Jabhadda Wadanid Xoreynta Ogadenya